अन्तर्राष्ट्रिय – SUDUR MEDIA
२५ करोड भारु क्षतिपूर्ति माग्दै मानहा.नीको मुद्दा हाल्न अदालत पुगिन् शिल्पा सेट्टी…..
July 30, 2021 AdminLeaveaComment on २५ करोड भारु क्षतिपूर्ति माग्दै मानहा.नीको मुद्दा हाल्न अदालत पुगिन् शिल्पा सेट्टी…..
एजेन्सी । आफ्नो पति राज कुन्द्राको मुद्दालाई जोडेर यति बेला बलिउड अभिनेत्री शिल्पा सेट्टी त’नावमा छिन । केहि सञ्चार माध्यमले श्रीमान कुन्द्राको विषयलाई आफुसंग जोडेर अ’फवाह फैल्याएको हुदा आफ्नो मानहा.नी गरेको भन्दै अदालत गएकी छन् । श्रीमान कुन्द्रा प’क्राउ परेपछि त’नावमा रहेकी अभिनेत्री शेट्टीलाई उक्त घ’टनासंग जोडेर गलत प्रचार गरेको भन्दै बम्बै हाइकोर्टमा मु’द्दा हालेकी […]
अनौंठो प्रेम ! सेनाका जवानसँग प्रेम भएपछि पतिलाई दिईन् डिभोर्स , छोरी जन्मेपछि सेनाका जवानले भने ‘तलाई म चिन्दिन’…..
July 23, 2021 AdminLeaveaComment on अनौंठो प्रेम ! सेनाका जवानसँग प्रेम भएपछि पतिलाई दिईन् डिभोर्स , छोरी जन्मेपछि सेनाका जवानले भने ‘तलाई म चिन्दिन’…..
एजेन्सी – बिवाहित महिला एक सैनिक जवान प्रति आकर्षित हुन्छिन् । उनको त्यो प्रेम सेनाका जवानसँग ब्यक्त गर्छिन् । ती सैनिककै सल्लाहमा उनले आफ्नो पतिलाई डिभोर्स समेत दिइन् । जवानले ती महिलासँग बिहे गरे । उनलाई भाडामा कोठा लिएर राखेका थिए । एक बर्ष पछि उनीहरुको छोरी समेत जन्मिइ । परिवार राम्रै चलिरहेको थियो, त्यति […]
राज कुन्द्राले पो.र्न भिडियोबाट कमाउथे मासिक झन्डै ४ करोड रुपैयाँ……
July 21, 2021 AdminLeaveaComment on राज कुन्द्राले पो.र्न भिडियोबाट कमाउथे मासिक झन्डै ४ करोड रुपैयाँ……
एजेन्सी । भारतीय व्यापारी तथा बलिवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका श्रीमान राज कुन्द्रा यति बेला हि’रासतमा छन । उनलाई भारतमा पो.र्न भिडियो छायांकन गरेर विक्री गरेको आरोपमा मुम्बई क्राइम ब्रांन्चले प’क्राउ गरेको हो । कुन्द्रालाई आगामी जुलाई २३ तारिखसम्म हिरासतमा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ । राज कुन्द्रालाई यस र्याकेटको मुख्य योजनाकार समेत मानिएको छ । […]
बङ्गलादेमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ हजार २१४ पुगेको छ । यो सँग बङ्गलादेशमा आइतबारसम्ममा कोरोना भाइरस स’ङ्क्रमित व्यक्तिको कूल सङ्ख्या नौ लाख ३६ हजार २५६ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा स’ङ्क्रमित १३४ जनाको मृ’त्यु भएको बङ्गलादेशको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालयले पुष्टि गरेको छ । सरकारको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा कोभिड–१९ […]
क्यानबेरा, १२ असार । अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा शनिबारदेखि १४ दिने लकडाउन शुरु भएको छ । विशाल सिड्नी, ब्ल्यु माउन्टेन्स, सेन्ट्रल कोष्ट र वोलोङगोङ लगायतका क्षेत्रमा लकडाउन लागू गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । कोरोना भाइरसको डेल्ट भेरियन्टको महामारी थप फैलिने खतरा रहेकाले लकडाउन लगाउनु परेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । अहिले घोषणा गरिएको लकडाउन अघिल्ला पटकभन्दा कडा गरिने […]
June 26, 2021 June 26, 2021 AdminLeaveaComment on कोभिडको सं’क्रमण बढेपछि बंगलादेशमा सोमबारदेखि देशव्यापी लकडाउन गरिने…..
कोरोना स’ङ्क्रमणको दर नघटेपछि बंगलादेशमा आगामी सोमबारदेखि कडा खालको लकडाउनको घोषणा गरिएको यहाँको सरकारले जनाएको छ । यहाँ पछिल्लो केही दिनमा कोरोनाका स’ङ्क्रमितहरु बढ्दै गएपछि सो घोषणा गरिएको राजधानी ढाकाबाट प्राप्त भएका समाचारमा जनाइएको छ । बंगलादेशको सरकारले आगामी सोमबारदेखि एक साताका लागि देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेको समाचारमा जनाइएको छ । लकडाउन आगमी सोमबारबाट शुरु […]
May 1, 2021 AdminLeaveaComment on सधै आफैसँग टिभीमा आउने रोहितको मृ’त्युको खबर आफैले रिपोर्टिङ गर्नु पर्दा आजतकका टिभी जर्नलिस्टहरु लाइभ टेलिकास्टमै ग्वा’ग्वा रो’ए ! हे’र्नुहोस (भिडियो सहित)
भारतका चर्चित टिभी पत्रकार रोहित सरदानाको नि’धन भएको छ। अप्रिल २४ मा ४२ वर्षीय रोहित सरदानाले ट्वीट गरेका थिए कि एउटा सीटी स्क्यानमा कोरोना सं’क्रमण पुष्टि देखिएको छ । त्यसपछि उनले भने कि उनको अवस्था सुधार भइरहेको छ तर छ दिन पछि उनको मृ’त्यु भएको छ । तर टिभी च्यानलले भने उनको कार्डियक अरेस्टको कारण […]
एजेन्सी । भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर महामारीका रुपमा फैलिएको छ । दिनहुँ डेढ लाख भन्दा बढी मानिस सं’क्रमित भएका छन् । सयौंले ज्या’न गुमाएका छन् । कोरोना थप फैलन नदिन चोक चोकमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । दिल्लीमा क’र्फ्यु पनि लगाइएको छ । तर सर्वसाधारणले प्रहरीको आग्रह समेत वे’वास्ता गरेका छन् । हालै सामाजिक सञ्जालमा […]
एजेन्सी । तपाइले हिन्दी फिल्म हेर्ने गर्नुभएको छ भने २००६ मा, सूरज बड़जात्याले बनाएको फिल्म विवाह को बारेमा थाहा छ होला । जसमा दुलही बनेकी अमृता राव आफ्नो बहिनी नाता पर्नेलाई बचाउन आगोमा जल्छिन् । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि बेहुला बनेका शाहिद कपूरले उनीसँग विवाह गरे । यो रिलको जीवनको तस्विर हो जुन पनि ठूलो […]
April 4, 2021 AdminLeaveaComment on एक युवतीसँग दुई युवकको प्रेम, रातिमा पनि हुन्छ यसरी बि’स्तारा शेयर…..
यो दुनियाँमा कहिलेकाहीँ पत्याउने नसकिने घटना हुन्छन् । ब्राजिलमा त्यस्तै भएको छ । दुईजना ब्राजिलियन युवकहरुले एउटै युवतीलाई मन पराए र दुवैले प्रेम प्रस्ताव पनि राखे । अचम्म त के भने ती युवतीले दुवै युवकको प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गरिन् । त्यसपछि ती युवतीको प्रेम सम्बन्ध दुवै युवकसँग रह्यो । अर्थात् दुई युवक र एक युवतीबीच […]